BELLEVUE SEO & YEMAHARA SEARCH ENGINE KUSVIRA
Bellevue SEO Mubatsiri
Kana bhizinesi rako remunharaunda risiri papeji rekutanga reGoogle, vakwikwidzi vako vari kutora zvinopfuura 85% yevatengi vako.
Kana iwe uine bhizinesi remuno, iwe unotoziva kukosha kwazvinoita kukwirisa mune dzekutsvaga mhinduro Zvino izvo internet zvave iko kwekutanga sosi vatengi vanotendeukira kune yemuno bhizinesi ruzivo, kusazviratidza kumusoro kwemuno kutsvaga kwakafanana nekusavapo pane internet.
Kutsvaga kwenzvimbo kunokonzera 50% yevanotsvaga nhare kushanyira emabhizinesi emuno mukati memazuva. Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti Google yakachinja iyo yekutsvaga algorithm kuti ipe yakakwira masosi kune mawebhusaiti ayo akagadziridzwa nenhare mbozha.
96% yevatengi vanoshandisa internet kana vachitsvaga zvigadzirwa zvemuno nemasevhisi.
94% yevashandisi vese ve smartphone vakatsvaga ruzivo rwemuno.
Kuva newebsite yebhizinesi rako kwakakosha, asi webhusaiti yako inoda kugadzirirwa izvo zviri kutsvakwa nevatengi veko. 36% yevatengi vanoti webhusaiti yakanyatsogadzirwa inopa bhizinesi remuno kutendeseka.
32% muzana yevatengi vanowanzo bata bhizinesi remuno kana vane webhusaiti.
98% yekutsvaga sarudza bhizinesi riri papeji imwe yemhedzisiro yavanowana.
88% muzana yevatengi vanobvunzurudza ongororo pamhepo vasati vatenga masevhisi emuno
The Google 3-Rongedza inowanikwa munzvimbo yepamusoro pa93% yekutsvaga nechinangwa chemuno. Sezvo Google yakadzora nzvimbo dzepamusoro kubva pamanomwe kusvika kumatatu zvakakosha kuti bhizinesi rako remuno rive SEO rakagadziriswa kuti usvike nzvimbo dzakachiviwa.
Tsvagurudzo yeGoogle mumaitiro ekutsvaga emuno inoratidza kuti vatsvagiri vemunharaunda vagadzirira kutora matanho. Maererano nezvavanowana, "50% yevatengi vakatanga kutsvaga kwemunharaunda pa smartphone yavo vakashanyira chitoro mukati mezuva rimwe chete, uye 34% vakatsvaga pamakomputa / piritsi vakaita saizvozvo." Izvi zvinoratidza hukama hwakananga iyo chinzvimbo mukutsvaga kwemuno kune mune-chitoro traffic.
Maererano nechidzidzo che Chitika, 91 muzana yevanotsvaga vanosarudza bhizinesi riri papeji imwe yemhedzisiro yekutsvaga. Pamusoro pezvo, yekutanga organic chinzvimbo pane yekutsvaga injini mhedzisiro peji inogamuchira makumi matatu neshanu muzana ezve mabhatani
isenselogic.com ine makore echiitiko mukubatsira mabhizinesi madiki ne kushambadzira pamhepo uye SEO kubvunza. Tiri pano kubatsira bhizinesi rako kuti ribudirire. Taura nesu nhasi yemahara SEO webhusaiti odhita uye kiyi yekutsvaga kweako chaiwo bhizinesi. Mabasa edu akavimbiswa. Kana iwe usina kugutsikana zvizere tichadzorera chero muripo uye iwe unogona kukanzura masevhisi edu.
Kukwidziridzwa kwakakosha: Mwedzi wega wega isu tichaita yemahara Bellevue SEO masevhisi emabhizimusi emuno gumi kwemwedzi mumwe pazwi rimwechete uye rimwe papeji-optimization. Kana iwe usina kunyatso kufadzwa nezvatakasiya iwe haubhadhare. Hapana mari yepamberi kana kondirakiti yekusaina.
SEO chirongwa chemitengo or
Yemahara webhusaiti odhita